အာလူး pancakes ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
pancakes - ရိုးရာဘီလာရုအိမ်လုပ်ပန်းကန်။ ယင်း၏ရိုးရှင်းနှင့်ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးကြိုက်တယ် pancakes ၏အံ့သြဖွယ်အရသာသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် , ဒိန်ခဲနှင့်အတူ zucchini နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်မသက်ဆိုင်နောက်ထပ်၏, ထိုအရသာအမြဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရရှိသောဖြစ်ပါတယ် - တစ်စုံတစ်ဦး။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ pancakes အာလူးချက်ပြုတ်နှင့်ကရိုးရာမုန့်ညက်နှင့်သူ့မိသားစုများအတွက်လုပ်ပုံကို, သင်အနည်းငယ်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
minced အသားနှင့်အတူအာလူးတစ်အရသာ pancake ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါဟာအမှန်တကယ်တော်ဝင် pancakes ဖြစ်ပြီး, သငျသညျအစဉျအမွဲအိမ်မှာသူတို့ကိုချက်ပြုတ်လျှင်, သူတို့သည်သင့်မိသားစုတစ်အကြိုက်ဆုံးဟင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အာလူး - 850 ဂရမ်;
ကြက်သွန်ဖြူ -2zubochka;
မုန့်ညက် - 60 ဂရမ်,
သင်သည်မည်သည့်ကိုသုံးနိုင်သည်ဒီပန်းကန်အဘို့အမဲသားကို Minced, ကအရေးမထားဘူး, ဒါကြောင့်သာသင့်ကိုယ်ပိုင်အရသာအပေါ်အဲဒီမှာအားကိုးနိုင်ပါတယ်။ ထုကြက်သွန်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူနံ့သာမျိုးနှင့်ဆားကုန်တယ်ပု minced အမဲသားကိုမှထည့်ပါ။ သင်အလွန်အမင်းသိပ်သည်း stuffing ဆိုပါက juicier အောင်ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ တစ်ဦးကြမ်း grater အပေါ်ဖျက်စီးသန့်ရှင်းရေဆေးအာလူး, ကျနော်တို့ပိုလျှံအရည်ဖယ်ရှားပစ်ရ။ အာလူးနဲ့သုံးကြက်သွန်နီ, အလှည့်တွင် - သူသူမ၏မှောင်မိုက်ကိုမပေးခဲ့ပါဘူး။ အာလူးဖို့ပိုရေအေးထဲမှာပွတ်နယ်ကစောင့်ရှောက်မိုက်ကြသည်မဟုတ်။ ဒါ့အပြင်အာလူးမုန့်ညက်, ဆား, ကြက်ဥနှင့်ကောင်းစွာသော့ပွငျ၏အလေးချိန်မှဖြည့်စွက်။ အရှိကိုတစ်ကြော်ဒယ်အိုးထဲမှာနွေးထရေနံကောင်းသောတစ်ဇွန်းတစ်ပါးလွှာ oladushek အတွက်ဖိတ်, အာလူးထွက်အိပ်လေ၏။ Minced အာလူး၏ထိပ်ပေါ်မှာ Patti နှင့်နေရာဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထိပ်တန်းနောက်တဖန်အာလူးအရောအနှောကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ညင်ညင်သာသာနှိပ်နင်း။ draniki ပြီးနောက်ပေါင်းအတွင်းပိုင်း stuffing ရန်၎င်း၏အဖုံးတွေနဲ့ဖုံး inverted ။ အစဉ်အလာ pancakes အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် - အချဉ်မုန့်အတူ။
ဘီလာရုအာလူး pancakes, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘယ်လာရုစ်ဆိုအဖြစ် - အာလူး pancakes, အအခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကိုယ့်တစ်ဦးအလွန်နူးညံ့သော texture ပါစေ။ အာလူးပုံမှန်အတိုင်း grater အပေါ်ပွတ်နယ်နှင့်ဖြူစင်သောသို့လှည့်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြသည်မဟုတ်။ ဒီစာရွက်စနစ်တကျဘီလာရုအာလူး pancakes ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
အာလူး - 0.5 ကီလိုဂရမ်;
အာလူးကွာစင်သို့မဟုတ် Blender များအတွက်အထူး float သုံးပြီးစင်ကြယ်သောသို့ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကကြက်သွန်နီလုပ်ပါ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အာလူးအရည်ကနေကွဲကွာသောနောက်ပါကညှစ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ mashed ကြက်ဥထဲမှာ drives, ဆား, ကောင်းစွာရောမွှေပါ။ ကြော်ဇွန်းတွေအများကြီးထွက်တင်သောတစ်ကြော်ဒယ်အိုးထဲမှာ pancakes ။ အချဉ်မုန့်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းကန်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
pancakes များအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းအများအပြားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကျက်သရေရှိပါတယ်။ ဒီစာရွက်ထဲမှာကျနော်တို့များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစားထိုးနေသောအာလူးကနေဖန်ဆင်းတော် crispy အာလူး pancakes, ပြင်ဆင်ထားရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ် အာလူးကြော် ။
အာလူး - 800 ဂရမ်;
ကစီဓါတ်ပါ - 50 ဂရမ်,
ဆား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ, နံ့သာမျိုး။
အာလူးကင်းစင်နှင့်ပွတ်တိုက်တစ်ဦးကြမ်း grater အပေါ်, ဆန့်ကျင်အပေါ်ကြက်သွန်နီ - တစ်ဒဏ်ငွေအပေါ်, သူတို့ကိုပေါင်းစပ်, ကြက်ဥကိုမောင်းဖို့, prisalivaem မွှေပေးပါ။ pancakes မှ crispy ခဲ့ကြသည်, သင်ပိုလျှံအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဝါဂွမ်းအထည်သို့မဟုတ် cheesecloth ယူ, မည်သည့်ပိုလျှံအရည် spinning နှင့်ဖျစ်ညှစ်သောကြောင့်ထဲသို့အာလူး stuffing သွန်းလောင်း။ အာလူးကစီဓါတ်ခန်းခြောက်စေနှင့်နံ့သာမျိုးကိုသွန်းလောင်း။
အနီးလက်မှာအဘယ်သူမျှမသွေ့ခြောက်သောကစီဓါတ်ပါရှိခဲ့ပါလျှင်, ငါတို့သည်ကိုယ်အာလူးကစီဓါတ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ကိုသွန်းလောင်းနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်ရပ်တည်ဖို့ကမပေးညှစ်ထားတဲ့အရည်။ ကစီဓါတ်, အောက်ခြေမှအနည်ထိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်သင်ဂရုတစိုက်ညှစ်ဖို့လိုတယ်, ကစုဆောင်းနှင့်ဇွန်းပြီးလျှင်အာလူးကပေးပို့ပါ။
အလွန်ကောင်းသောနွေးတက်ဒယ်အိုး, ရေနံနှင့် ပတ်သက်.5မီလီမီတာသွန်းလောင်း။ ဇွန်းအာလူး stuffing ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် spatula တိုက်ရိုက်လှည့်မပို 8 ထက်မီလီမီတာ oladushek မှထိပ်ကိုခံရ၏။ အဆိုပါ pancakes အနည်းငယ်ဆုပ်ကိုင်, ညင်ညင်သာသာရေနံကို run ဖို့သူတို့ကိုရွှေ့သို့မဟုတ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်အခါ။ စက္ကူလက်သုတ်ပဝါပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပဝါပေါ်တွင်အဆင်သင့် pancakes ထားပါ။ အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမီသင် paprika နှင့်အတူဖြန်းနိုင်ပါသည်။
ကင် roasting ၏ဘွဲ့
Oat oatmeal ထံမှချက်ပြုတ်နည်းများ - ဖန်ဆင်းသောထံမှ oat မုန့်ညက်, ဘာလဲ
ကိတ်မုန့်တစ်ချောကလက် glaze ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရိုင်းမှိုချက်ပြုတ်ကိုအကောင်းဆုံးအိုင်ဒီယာ - မှိုမှိုချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Tubo-otitis - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
Uma Thurman အမည်မသိယောက်ျား၏ကုမ္ပဏီအတွက်စိန့် Bart ကျွန်းပေါ်မှာကြွင်းသောအရာရှိပါတယ်
Dukan Diet - အားလုံးအဆင့်ဆင့်အဘို့ချက်ပြုတ်နည်း
အဆိုပါ GHA မီးယပ်အတွက်ကဘာလဲ?
"မြန်နဲ့ 8 & Furious" ဟုအဆိုပါရုပ်ရှင်ထဲတွင်နမ်း: မတူကွဲပြားအမြင်များ
Polycarbonate ပေးရ Pergolas
သင်၏လက်နှင့်အတူစက္ကူကနေငါး - ကလေးတွေအဘို့လက်မှုပညာ
အချဉ်မုန့်နှင့်အတူ pancake ကိတ်မုန့်
အင်ဒရူး Garfield မပြတ်မကသူ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်အကြောင်းကိုနောက်တဖန်မိန့်တော်မူ
အန္တရာယ်အရှိဆုံးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလိင်တွင်ဤ7pose!